दुई हप्तामै बन्ला सडक ? – Rajmarg Online
दुई हप्तामै बन्ला सडक ?
तुलसीपुर, कात्तिक । तुलसीपुरमा चारलेन बनाउने कार्य अबको दुई हप्तामा पुरा हुने निर्माण कम्पनीले बताएको छ । निर्माण कम्पनी प्रमुख प्रकाश महताराका अनुसार अहिलेसम्म ८० प्रतिसत काम पुरा भईसकेको छ ।
उहाले भन्नुभयो ‘अब २० प्रतिसत मात्रै काम बाँकी छ, अब १४÷१५ दिनमा पुरा हुन्छ ।’ अब दोस्रो चरणको कालोपत्रे गर्ने र रंग–रोगन गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ । साथै डिभाईडरमा पनि माटो भर्ने काम भईरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस अघि दुबै तर्फ पहिलो चरणको कालोपत्रे गर्ने काम भएको र अबको ६ दिनपछि दोस्रो चरणको कालोपत्रे गर्ने काम शुरु हुने उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म करिब तीन करोड रकम खर्च भईसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
तुलसीपुरको हातिखौवा देखि वीरेन्द्र चौकसम्मको सडक चार लेन बनाउने कार्य ढिला भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको थियो । चारलेन बनाउने भनी सम्झौता भएको चार बर्ष बिति सक्दा पनि निर्माण कार्यले पूर्णता नपाउँदा त्यस क्षेत्रका नागरिक तथा यात्रुहरु धुलोको मार खेप्नु पर्ने बाध्यता थियो । एक बर्षमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमा काम हुन सकेको थिएन् ।
२०७१ सालमा सम्झौता भएका तुलसीपुरको चारलेन बनाउने कार्य २०७२ असोजमा पुरा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन् । अहिले तेस्रो पटक म्याद थप भएर काम जारी छ । तुलसीपुरको हात्तीखौवादेखि वीरेन्द्रचोकसम्मको ९ सय मिटर सडकलाई चारलेन बनाउन लागिएको हो । चार करोड ५५ लाख बजेटमा उक्त सडकलाई गौरी पार्वती निर्माण सेवाले निर्माण गरिरहेको छ । तुलसीपुरको हातिखौवा देखी बिरेन्द्र चोक सम्मको सडक निर्माणका लागि २०७१ असार ३२ गते सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण कम्पनीले दुई हप्तामा काम सक्ने बताए पनि त्यो अनुसारको तयारी भएको देखिएको छैन । जस्का कारण दुई हप्तामा निर्माण सक्ने सम्भावना नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।